डुबाए प्रधानमन्त्री ज्यू आफ्नैले « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
डुबाए प्रधानमन्त्री ज्यू आफ्नैले
प्रकाशित मिति : २०७६, २१ चैत्र शुक्रबार २१:२५
कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको औषधि खरिद सम्झौतालाई लिएर यतिबेला ठूलै तरंग छाएको छ कोरोनाको भन्दा पनि । पात्र भानुभक्त ढकाल, ईश्वर पोखरेल जो जोडिएपनि यसको अपजस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्नुभएकै हो । तर भनाई र सरकारको काम गराई हेर्दा प्रधानमन्त्रीको वरिपरि सबै भ्रष्टारीनै त छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ । चाहे यो औषधि काण्ड, गोकुल बास्कोटा काण्ड हेर्नुस् त ।
यी सबै काण्ड हुनुमा प्रधानमन्त्री स्वयम् र उनका सल्लाहकारहरुनै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् कार्यकर्ताका त के कुरा गर्नु ताली बजाउने त हो । विषय नै थाहा हुँदैन विचरा सामाजिक संजालमा लेखिहाल्छन् र पछि सायद आत्मग्लानी गर्दा हुन् । यहाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारका बारेमा केही कुरा गरौं ।
डा. कुन्दन अर्यालले प्रेस सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएपछि सूर्य थापालाई प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार बनाइयो । पत्रकारिता गरेकै व्यक्ति भएकाले उनी प्रेस सल्लाहकार भएपछि झनै राम्रो भन्ने आमपत्रकारको अनुमान थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भएको केही दिनसम्म त उनले सामाजिक संजालमा त्यस्तै कुनै नराम्रो प्रतिक्रिया जनाएनन् ।
तर एकहप्ता पछि उनले बधाई दिनेहरुलाई धन्यवाद दिँदै जोरी खोज्नेलाई चुकेल्याङ(जुन शब्द शब्दकोषमा पनि छ कि छैन) बनाइदिन्छौं भने । त्यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि कुन्दन अर्यालले सूर्य थापाको जस्तो छुसी काम गर्न नमानेरै प्रधानमन्त्रीले मनपराएका रहेनछन् भनेर । त्यसपछि थापाको काम सुरु भयो । उनले आफ्नै पार्टीका नेता भीम रावललाई खुइल्याउन थाले । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल भएका विषयबस्तुबारे पत्रकारलाई बताएको कुरालाई लिएर थापाले प्रवक्ता छँदाछँदै किन बोलेको भनेर फेसबुकमा तुच्छ शव्दमा लेख नै लेखे । रावललाई खुइल्याउने क्रम लामै समय चल्यो ।
प्रधानमन्त्री त्यो खुइल्याई हेरिरहे । थापा रावललाई खुइल्याउने स्तरका थिएनन् । ओलीसँगै जेल बसेका थिए रावल । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीसमेत भइसकेको नेतालाई यसो भनिरहँदा किन चुप बसे त प्रधानमन्त्री भन्दा आफैंले लगाएका थिए रावलाई खुइल्याउन । रावलमात्र होइन थापाले पार्टीका र आफ्ना विरोधी सायद कसैलाई बाँकी राखेनन् ।
यतिसम्मकी पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाईसमेत बाँकी राखेनन् । पार्टी निकटकै एकजना पत्रकारले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका बारेमा समाचार लखेको विषयलाई लिएर उनले खुमलटारको दानापनी खाएर काम गर्ने भनेर धम्क्याए । यी काम सबै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएका थिए । यदि थिएनन् भने किन यस्तो गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले रोकेनन् त ? त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको ट्वीटर ह्वान्डलबाट भारतीय कांग्रेसकी नेतृ सोनिया गान्धीको ट्वीट रिट्वीट भयो । त्यो विषयले भारतीय संचारमाध्यले ठूलै समाचार बनाए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले छानविन गर्ने भन्यो तर केही भएन । त्यसमा पनि थापाकै हात रहेको बताइएको छ ।
पार्टीकै नेताहरुले यस विषयमा छानविनको माग गरे । तर खै त छानविन भएको ? औषधि खरिद काण्डमा पनि उनले खुबै प्रतिरक्षा गरे । ‘फाटेको जालोले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्ग देखेको’जस्तै छ यो दुष्टता र पाखण्डीपन’ भनेर लेख नै लेखे । अनि काठमाडौं प्रेस डटकमको साइट ह्याक गरी समाचार डिलिट गरेको विषयमा पनि उनले पत्रकार महासंघलाई धम्कीपूर्ण भाषामा विज्ञप्ती जारी गरे । उनका गतिविधि देख्दा देश प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारबाट चलेको आभास हुँदै गएको छ ।
थापाका केही विज्ञप्ती हेर्नुस्
गोकुल बास्कोटा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रिय मध्येमा पर्छन् त्यसैले त उनले मन्त्री भएपछि पनि आफ्नो घर रुघ्न राखेका छन् । संचारमन्त्री बनाएपछि बास्कोटामा दम्भ एकदमै थियो । उनी सकारात्मक भन्दा पनि बढी नकारात्मक तवरले प्रस्तुत हुन्थे । काभ्रेमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा प्रधानमन्त्रीले अरुमन्त्री एकातिर र बास्कोटा एकातिर राख्दा पनि बास्कोटाको तौल बढी हुन्छ भनेर भने । त्यो भनेको एक साता पनि पुगेको थिएन । बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि बास्कोटाले राजीनामा त दिए तैपनि प्रधानमन्त्री अझै भन्दैछन् कि बास्कोटा निर्दोष छन् ।
रिमाल पनि प्रधानमन्त्रीका प्रियनै हुन् । कहिले छौंडा त कहिले के भनेर ट्वीट गर्दै पार्टीकै नेतालाई प्रहार गर्न माहिर रिमाल पनि विवादमा परेका छन् । उनको यो ट्वीट खुबै विवादमा परेको थियो। यस्ता पनि ट्वीट गरे रिमालले,‘भनिन्छ, छौंडाहरू आफैं चलमलाउँदैनन्, कसैले छोड्छन्, दुःख दिन्छन् ! यी छौंडाहरू, आफैं चलमलाएका हुन् की, कसैले छोडेका ?’
त्यसैगरी उनका एकआफन्तले संचालन गरेको मिडियालाई सहयोग गर्नुपर्यो भनेर २७ वटा बैंकलाई खाता खोल्ने अभियान संचालन गर्नुपर्यो भनेर पत्र लेखेको विषयमा रिमाल विवादमा तानिएका थिए । बैंकर्स संघले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । सल्लाहकारको काम त सल्लाह दिने हो नि प्रधानमन्त्रीलाई तर सरकारले गरेका निर्णयका बचाउ गर्दै अग्रपंक्तिमा आउँछन् उनी । अहिलेको औषधि खरिद प्रकरणमा रिमालका छोरा जोडिएको समाचार आएका छन् ।
असगर अली, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ
यी प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी विज्ञ हुन् । अहिले काठमाण्डूप्रेस डटकमको समाचार डिलिट गरेकोविषयमा विवादमा तानिएका उनी यसअघि पनि विवादमा परेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको समूह नेपालमा आएको र उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको तर, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ अली अपराधी छुटाउन प्रहरीलाई भेट्न गएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर त्यतिवेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले समाचार भ्रामकभएको भन्दै खण्डन गरेका थिए ।
एफवानसफ्टको सहायक कम्पनी सिरान टेक प्रालिले काठमान्डूप्रेस अनलाइनको वेबसाइट निर्माण गरेको र अलीविरुद्ध समाचार आएपछि अलीकै निर्देशनमा समाचारको लिंक हटाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । तर, अली भने आफूलाई समाचारको बिषयमा थाहा नभएको र समाचारको लिंक कसरी डिलिट भयो भन्ने कुरामा आफू अनभिज्ञ रहेको दाबी गर्छन् । त्यस्तै उनले आफ्नै पहलमा एयरपोर्टमा बोर्ड बायोमेट्रिक सिस्टम जडानको काम, राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का प्रक्रिया निकै विवादित छ ।
उनकै पहलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कागजबिहीन बनाउने काम सुरु भएको थियो । यसको लागि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई ल्यापटप किनिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गरिएको यो खरिदको जिम्मा पनि ओम्नी कम्पनीले नै पाएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्री र मन्त्रालयको कामको अनुगमन गर्न सफ्टवेयरसमेत निर्माण गरेको थियो, जुन अली संलग्न रहेको कम्पनी एफवानसफ्टले बनाएको हो । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहाकारमा छिरेर राष्ट्रका करोडौका काम विना टेण्डर हात लगाउदै आएका अलि ई सेवाका संचालक समेत हुन् ।
डा. खेम कार्की, स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकार कार्की कोरोना भाइरस संक्रमणकाबारेमा दैनिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउन थालेपछि केही दिन उनी दैनिक रुपमा प्रस्तुत भए । उनले के सम्म गरेभने स्वास्थ्य मन्त्रालयको लेडरप्याडमा टेष्ट कीटकाबारेमा प्रश्न नगर्न भने । तर खरिद प्रकरण विवादमा परेपछि उनी अहिले मन्त्रालयको दैनिक हुने पत्रकार सम्मेलनमा देखिन छाडेका छन् । हेर्नुस् विज्ञप्ती
यी त प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुका केही उदाहरणमात्र हुन् ।
अब हेरौं कार्यकर्ताले औषधि प्रकरणमा सामाजिक संजालमा व्यक्त गरेका विचार । अनि उनीहरुका विचारलाई नेतादेखि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले दिएका जवाफ हेरौं ।